China SPC Ft SM-020 Nlụpụta na Factory | N'akụkụ
SPC flooring bụ site na extruder jikọtara ya na T-ụdị ebu extrusion PVC mkpụrụ, ya na atọ rollers ma ọ bụ anọ rollers nke Rolling igwe ịkwanyere eyi oyi akwa, ịkwanyere agba film na ịkwanyere mkpụrụ, otu oge kpo oku kwesịrị ekwesị, embossed ngwaahịa, usoro chọrọ bụ nnọọ elu, dabara na okpomọkụ iji wuchaa, anaghị achọ gluu.
SPC ihe eji eme ihe eji eme ihe na gburugburu ebe obibi, nke enweghi ọla, phthalates, methanol na ihe ndị ọzọ na-emerụ ahụ, kwekọrọ n'ụkpụrụ GB4085-83.
SPC flooring na-ewu ewu na mba ndị mepere emepe na Asia Pacific ahịa na Europe na United States. Site na uru arụmọrụ ya dị mma gburugburu ebe obibi SPC abụghị naanị na-edozi nsogbu nke osisi siri ike nke ala nrụrụ akpụzi, kamakwa ọ na-edozi nsogbu nke formaldehyde nke ihe ịchọ mma ndị ọzọ.
Ntinye dị mfe, ihe owuwu dị mfe, ịkwesighi ịkụnye mkpịsị osisi ahụ, ala adịghị mkpa ịme ọgwụgwọ mmiri, ọ dịghị mkpa usoro iwu ihe mgbagwoju anya, chekwaa oge ntinye na ego. Enweghị mgbawa, enweghị mmụba, enweghị nrụrụ, enweghị nrụzi na ndozi, dị mfe ihicha, chekwaa mbubreyo mmezi na mmezi mmezi. Mmetụta nsị nke ụda dị mma, nchekwa nchekwa dị mma, ikpo ọkụ na-ebufe ngwa ngwa mkpuchi dị mma, nke mere na ike ime ụlọ na-echekwa ihe karịrị 30%.
Na-acha, họrọ site na agba dịgasị iche iche, dị iche iche. SPC flooring film iji elu-definition ebi akwụkwọ technology, nwere ike n'ụzọ zuru ezu na-egosipụta ịhụnanya na ịdị nro nke osisi ala; Oghere oghere SPC ịke bụ ọgaranya, ma ọ bụ ewu osisi na okwute na ụdị ndị ọzọ a ma ama, ma ọ bụ ugbu a, oge "Buddhist", anyị niile na-asọpụrụ usoro okike, nwere ike afọ ojuju.
Nke gara aga: Ogige SPC 207
Osote: SPC Ala SM-021